Ekenareo ve ny andraisan-tanana ny Mpitandrina Rakotoniera Eric eto amin’ny FJKM Ambavahadimitafo? – FJKM Ambavahadimitafo Ekenareo ve ny andraisan-tanana ny Mpitandrina Rakotoniera Eric eto amin’ny FJKM Ambavahadimitafo? |
Ekenareo ve ny andraisan-tanana ny Mpitandrina Rakotoniera Eric eto amin’ny FJKM Ambavahadimitafo?
A la une.Fanadihadiana.Vaovaom-piangonana
Publié le 11 mai 2012 à 09:05
Amin’ny Alahady 13 mey 2012 izao, ao aorian’ny fanompoam-pivavahana no hotanterahina eto amin’ny fiangonana ny fanehoan-kevitra mikasika ny fandraisan-tànana ny mpitandrina Rakotoniera Cristian Eric. Ny fanontaniana hapetraka amin’izany moa dia ny hoe :
Araka ny fitsipiky ny FJKM moa dia latsa-bato miafina no hatao amin’izany, satria mahakasika olona ny fanehoan-kevitra; raha toa ka tsanga-tànana kosa amin’ny fandaniana hevitra ohatra.
« Bulletin unique » ahitana ny safidy « ENY » na « TSIA » efa voahomana ho amin’izany no hanehoan’ny Mpandray ny heviny amin’izany, ka hasaina izy hanisy « X » manandrify izay valinteniny.
Marihina fa fanehoan-kevitra no atao fa tsy fifidianana.
Ireo Mpandray ny Fanasan’ny Tompo voasoratra ao amin’ny lisitry ny Mpandray eto amin’ny FJKM Ambavahadimitafo rehetra no antsoina haneho ny heviny amin’izany. Tsy voatery hitondra karatra maha-Mpandray akory izy ireo fa ny nomerao no hangatahina amin’izany, na ny anarana raha tsy izany.
Manentana indrindra ny Mpandray ny Fanasan’ny Tompo rehetra ho amin’izany fotoana izany satria zava-dehibe loatra ho an’ny fiainan’ny fiangonana sy amin’ny asan’Andriamanitra izany fotoana manokana izany.
Ho tahian’ny Tompo ianao.